OpenID ကိုထည့်သွင်းပြီး Ready! | Martech Zone
OpenID ကိုထည့်သွင်းပြီး Ready!
တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ 25, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
သင်မကြားဘူးဆိုရင် OpenID၎င်းသည်ဝဘ်ပေါ်ရှိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောနည်းပညာအသစ်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်မှတ်သားရန်လိုအပ်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ၀ င်ရောက်ရန် / စကားဝှက်များအားလုံးကိုကြည့်လျှင်ဤနည်းပညာသည်ကောင်းချီးတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျိန်စာဖြစ်နိုင်သည်။
တောက်ပသောအခြမ်းတွင်သင်၏ encrypted login နှင့် password ကိုသင်၏ server ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင် login လုပ်သည့်အခါသင်၏ server သို့ပြန်သွားသည်။ အနုတ်လက္ခဏာဘက်မှာ 'single point of failure' လို့လူသိများတဲ့အရာပါ။ သင်၏ login နှင့်စကားဝှက်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်မှစစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်လျှင် OpenID မှတစ်ဆင့်သင်သုံးနိုင်သောမည်သည့် system ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒီမှာ OpenID အကြောင်းတင်ပြချက်တို
OpenID အကြောင်းပိုမိုလေ့လာလေ၊ အစပိုင်းမှာတော့ငါတကယ်သံသယဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကို configure လုပ်ပြီးဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဒါဟာအရမ်းကောင်းတဲ့နည်းပညာတစ်ခုလို့ငါထင်တယ်။ AOL Microsoft က နှင့် ခြောက်လ OpenID ကိုပံ့ပိုးရန်နောက်ဆုံးပေါ်ရှေးရှေးလူနည်းစုအချို့သည်ရေနွေးငွေ့ကိုသုံးနေပုံရသည်။
OpenID နှင့် ပတ်သတ်၍ ထူးခြားသောအချက်တစ်ချက်မှာ၎င်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာပေါ်တွင်သိမ်းထားနိုင်သည်။ phpMyID ကိုကျွန်တော်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ။ ၎င်းသည်စမ်းသပ်ပြီးကြီးစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ Single User configuration အတွက်အလွယ်ကူဆုံးရွေးစရာကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဆာဗာတွင်လမ်းညွှန်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးပြီးဖိုင်များကိုတပ်ဆင်ပါ။ ငါရွေးချယ်သည်။ OpenID /
OpenID တောင်းဆိုမှုများကိုပြန်ညွှန်းသောကျွန်ုပ်၏ WordPress header file သို့ redirectors ထပ်ထည့်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်၏ login၊ realm (ဒီ phpMyID) နှင့်စကားဝှက်ကို encrypt လုပ်၍ ကျွန်ုပ်၏ password ကို configure လုပ်ရသည်။ ဤသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်သည်ဆာဗာတွင်အောက်ပါကုဒ်ပါသော PHP ဖိုင်တစ်ခုပေါ်ခဲ့သည်။
အဲ့ဒီ encrypt လုပ်ထားတဲ့ string ကို ID file အတွက် configuration ထဲကိုကူးလိုက်တယ်။
စမ်းသပ်ဖို့, ငါရိုးရှင်းတဲ့ URL ကိုသုံးပြီး login ခဲ့ရသည်
ဒါပဲ! ကျွန်ုပ်၏ OpenID လိပ်စာသည်ယခု http://martech.zone ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်ရွေးချယ်လိုက်သော Login နှင့် Password ကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်။
ရိုးရှင်းစွာပြောဆိုခြင်းမရှိသောအခြားကောင်းသည့်အချက်တစ်ခုမှာစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုထားသောအပလီကေးရှင်းများအသုံးပြုနိုင်သည့်ပုံမှန်သတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အမည်၊ မွေးနေ့၊ အချိန်ဇုန်၊ ကျား၊ မနှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန်သင်လုပ်နိုင်သည်။ ငါစိတ်ကူးကိုချစ်! ဖြည့်စွက်ရန်ပုံစံများလျော့နည်း။
OpenID ရှိ blogosphere တွင်သတင်းများစွာရှိသည်။ သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ပိုမိုဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပေးလိုသည် -
OpenID ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုအသုံးပြုခြင်း - ဖီးလ် Windley
Technorati ၏ WTF အပေါ်မှုန်ဝါး
အခြားမည်သည့်အရာမျှမဖွင့်ပါက OpenID သည်ရိုးရှင်းသော authentication အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မကြာမီအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ဘဏ်အကောင့်ကိုဖွင့ ်၍ မရနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အမှန်တကယ်ပေါက်ကွဲနိုင်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါသည်။ သင် OpenID bandwagon ကိုတက်လိုလျှင်၎င်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သောကန ဦး စာနယ်ဇင်းအချို့ကိုသင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်ချက်ချင်းလုပ်လိမ့်မည်။
25:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 28 တွင်
ဒီနေ့နဲ့ငါစမ်းသပ်ခဲ့တယ် Magnolia။ Magnolia အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါ့အကောင့်ကို OpenID နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်။ သို့သော်၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ header file တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုချက်ကိုပြန်လည်မပို့ဆောင်သော်လည်းဖြစ်စေ၊ URL အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် URL အတိအကျကို OpenID လယ်ပြင်၌ထားရသည်။
26:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 7, 15 တွင်
SuperUsers မဟုတ်သူများအတွက် OpenID
25:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 9, 28 တွင်
Openid အတွက် wp plugin ကိုသင်သုံးသလား။
ငါမြင်သည်နှင့်အမျှသင်၏အသုံးပြုသူများသည်မှတ်ချက်ပေးရန် openid မလိုအပ်ပါ။
25:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 24 တွင်
Alpesh ပါ OpenID Delegate WordPress ကိုပလပ်အင်?
25:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 28 တွင်
နောက်ထပ် plugin တစ်ခု ငါ Verselogic က OpenID ကိုရည်ညွှန်းနေတယ်။
25:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 33 တွင်
ကျွန်တော်မသေချာဘူး! အခြားစာဖတ်သူတွေလည်းစကားပြောလို့ရနိုင်မှာပါ။ နှစ် ဦး စလုံးစွမ်းရည်ရှိသည်မှာသံသယမရှိပါ။ OpenID သည်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည့်ရိုးရိုးနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
25:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 36 တွင်
မပူပါနဲ့။ ဟုတ်တယ်၊ သူတစ်ပါးပြောတာကိုဖတ်ချင်တယ်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်များကို 'open id' ed to ပြင်ဆင်ရန်စီစဉ်နေပါသလော
25:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 56 တွင်
ငါမထင်ဘူး မှတ်ချက်များအပေါ်မည်သည့် login မဆိုမှတ်ချက်များလျော့နည်းစေသည့်နေရာကိုငါတွေ့ပြီ။ မှတ်ချက်များသည်ဘလော့ဂ်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစာမျက်နှာကို ပြောင်းလဲ၍ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းကြောင့် Search Engine နေရာချထားမှုကို ဦး တည်စေသည်။ တကယ်တော့အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်, ငါအသုံးချခြင်းအားဖြင့်မှတ်ချက်ပေးရန်ပိုပြီးရှေးရှေးတိုက်တွန်းပါသည် Nofollow မရှိပါ.
မှတ်ချက်မပေးဖို့ဘယ်သူမှတားဆီးဖို့ငါဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး OpenID ဟာခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့လူတွေကမှတ်ချက်များအတွက် log in လုပ်လေ့ရှိရင်ငါ့စိတ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။
25:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 59 တွင်
26:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 4, 04 တွင်
Doug, မှတ်ချက်များအတွက် OpenID မလိုအပ်ပါ၊ ၎င်းကိုရွေးစရာတစ်ခုအနေနှင့်ထည့်ပါ။ ည့်သည်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်နာမည် / အီးမေးလ် / url combo နှင့်မှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်။ ငါသည်ငါ့ site ပေါ်တွင်အသုံးပြုစတင်ခဲ့သည် မရှည်လွန်းလွန်ခဲ့တဲ့။
26:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 56 တွင်
ဒါကတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းပါတယ် ငါနှင့်အတူအချို့စမ်းသပ်မှုပြုလိမ့်မည်နှင့်အဆင့်ဆင့်မှတ်ချက်များအတွက်ငါရှိသည်မှတ်ချက်များ plugin ကို။
26:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 9, 33 တွင်
မင်းကောင်းကောင်းလုပ်တယ်။ ငါလည်းအတူတူပဲ။ it စာဖတ်သူများနှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ရအောင်။
မတ်လ 8, 2007 မှာ 6: 36 AM
ငါပဲအလားတူအမှုကိုပြုန်းကျင်တယ်။ ငါကောင်းတဲ့အရာအားလုံးကို install လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမျဉ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်၏ WordPress ခေါင်းစဉ်တွင်ထည့်လိုက်သည်။
WikiTravel ကိုကြိုးစားပြီးကျွန်ုပ်သည် configured OpenID user name (alhome.net) ကိုထည့်လိုက်ပြီးဘာမှမဖြစ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်သို့ပြန်သွားသည်။
မတ်လ 8, 2007 မှာ 6: 37 AM
မတ်လ 8, 2007 မှာ 8: 52 AM
tags around your code. I'll try out Wikitravel and see! It could be that they are not honoring the redirect. It's good that it came back to your site, but it should redirect to your OpenID page. ဖြင့်မှတ်ချက်တစ်ခုတွင် code ကို tags around your code. I'll try out Wikitravel and see! It could be that they are not honoring the redirect. It's good that it came back to your site, but it should redirect to your OpenID page. tags around your code. I'll try out Wikitravel and see! It could be that they are not honoring the redirect. It's good that it came back to your site, but it should redirect to your OpenID page.